Umda kuyilo xa kuyilwa ilogo encinci | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Iimpawu ezinokufumaneka kule post zezi Inxalenye yencwadi yoyilo yowe-1970. Ngokuqinisekileyo usenokuba ubhidekile kunye nomfanekiso osemantloko, okhumbuza iFlipboard, usetyenziso lokufunda iindaba, kunye neBeats, uphawu olwaziwa kakuhle ngee-headphone zalo ezinkulu.
Xa kuyilwa ilogo yomncinci sinokuyifumana loo nto, emva kokuyila umxholo kunye nokuyithumela kwinkqubo yoyilo, siyaqonda ukuba ijongeka kakhulu njengale logo lophawu oluthile. Ke sinako ukufikelela kumda wokucinga okanye ubuchule bokuza nelogo egxininisa ubuncinci.
Ukuba sijonga ubugcisa okanye kwihlabathi loopopayi, iingqondi ezinje ngoChuck Jones, opopayi eWarner kwaye waqaphela ukudweba njengaye nabani na umntu ohlekisayo weTweety kunye nabanye abalinganiswa, ikope uHarold Loyd, uthathwa njengomnye wabahlekisi ababalaseleyo embalini. Mhlawumbi ikopi ayisosenzi esifanelekileyo, kodwa iphefumlelwe bubuninzi bemizobo yeli qhawe libalaseleyo, ukuze ekugqibeleni limnike isitayile sakhe, into eyenze umenzi weWarner omkhulu, yona ngokwayo yaba yinto eyahlukileyo.
Ngoku sijonga ubuncinci kuyilo lwelogo, kwaye sinokubuyela kuyo fumana ukuba baphi na abayili abaphefumlelweyo ukusukela kwiminyaka yama 70. Kwaye nangakumbi kule ndawo apho kukho utyekelo lokunciphisa kwizinto eziyimfuneko kunye nokuhlutha izinto ezigabadeleyo, njengoko ziqokelelwe yiWikipedia xa ichaza esi sitayile kunjalo.
Ke siyazifumana imida kulowo ucinga ukuba awunangqondo ekufuneka eyile ilogo kwaye kufuneka inikezele ukuyila uyilo olulodwa. Ngokunokwenzeka sijamelene nenani elipheleleyo lezisombululo, kodwa kolo thintelo lukhethekileyo kunye neenkcukacha, sifumanisa ukuba yintoni eyahlulahlula njengoko kwenzekayo noLoyd noJones.
Njengesiqhelo, ndikushiya nelinye igalelo ukusuka komnye umnyango ezinxulumene nelogo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ukuphefumlelwa » Ngaba kukho umda kuyilo xa kuyilwa ilogo encinci?
Inkqubo yoyilo kuyilo lwelogo: imizekelo ebonakalayo ekufuneka uyazi